Ineos 159 tartan Marathon oo ay weheliyaan Eliud Kipchoge ayaa adeegsanaya LiveU si loogu abuuro Muuqaal wax soo saar firfircoon oo loogu talagalay dokumentiga | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE
Home » News » Ineos 159 Challenge Marathon Run oo ay weheliso Eliud Kipchoge ayaa adeegsanaya LiveU si loogu abuuro Muuqaal wax soo saar firfircoon oo loogu talagalay dokumentiga
Ineos 159 Challenge Marathon Run oo ay weheliso Eliud Kipchoge ayaa adeegsanaya LiveU si loogu abuuro Muuqaal wax soo saar firfircoon oo loogu talagalay dokumentiga
Oktoobar 12th ee sannadkan, orodyahanka caanka ah orodka marathon Eliud Kipchoge ayaa dunida ka dhigay inay fadhiistaan, daawadaan oo dhagaystaan ​​markii uu orday orodkii labaad ee ugu horeeya laba saacadood, dejinta rikoor caalami ah oo aan rasmi ahayn, oo xirmay waqti aan la aamini karin oo ah 1: 59: 40 ee Loolanka Ineos 159.
Dhacdadan ayaa ka dhacday Vienna, Austria, iyada oo Kipchoge uu ku dhowaad laba daqiiqo ka dhaqso badan sidii hore loo orday. Dhismaha munaasabadda, LiveU oo muddo dheer ay wada shaqeynayeen Austrian, ETAS High-Tech Systems GmbH, waxaa qandaraas la galay shirkadda wax soo saarka ee Austrian Filmhaus Wien, oo isagana la shaqeynayay Ridley Scott Creative Group, Amsterdam, si ay u bixiso kaalmo farsamo. soo saarista dokumenti dokumenti ku saabsan dhacdada.
Caqabada ayaa ahayd in la abuuro matoor soo saarta gawaarida OB si loogu oggolaado kormeerida iyo xakameynta kaameeraha waqtiga-dhabta ah. ETAS waxay shaqaalaysiisay oo diyaarisay soosaarka OB gawaarida.15 ARRI Alexa oo qalabaysan kaamirooyin qalabaysan ayaa la geeyay agagaarka koorsada, waxayna kuxiran tahay 15 LiveU LU600 HEVC la wareegi karo. Gawaarida waxaa kujiray shan fariimood oo leh afar nooc oo ay kujiraan IFB oo loogu talo galay fiilooyinka iyo isgaarsiinta wireless. Waxaa jiray saddex shaashado kala duwanaansho ah oo ah '4K' quad multiviewer. ETAS sidoo kale waxay siisay shaqaalaha kaamirada tababarka LiveU.
Robert Frosch, Maareeyaha Xisaabaadka ee ETAS, oo si weyn ugu hawlanaa mashruucan, ayaa yidhi, “Maareeyaha filimka dokumentiga ah wuxuu u baahan yahay inuu awood u yeesho inuu ku arko, tayo aad u sarreysa, muuqaal kasta oo kaamara ah waqti kasta oo la joogo. Qeyb kasta oo LiveU ah, oo ku xeel dheer 10Mbps, ayaa diray HD SDI waxay quudisaa gawaarida wax soo saarka, iyo IFB, agaasimuhu wuxuu lahadli karaa hawl wade kastooniyaal ah inta lagu gudajiro dhacdada. Muuqaalka dhabta ah ayaa laga duubay kamarad kasta. Waa adeegsiga hal-abuurnimo ee teknolojiyadda LiveU waana mid siisay shirkadda wax soo saarka saxda ah iyo dabacsanaanta ay u baahan yihiin. ”
Shaqaalaha soo saare dokumentiga ah ayaa sidoo kale adeegsaday muuqaallo fiidiyoow ah oo ku saabsan quudinta kaamerada, taas oo noqotey mid lama huraan ah. Tani waxay ka dhigan tahay in kuwa baabuurka ku dhex jira ay arki karaan goorta, tusaale ahaan, dheelitirka cad ee loo baahan yahay in la isku hagaajiyo ama heerar sare loo baahan yahay si loogu isticmaalo tallaalada xawaaraha sare. ETAS waxay sidoo kale maareeysay gaarsiinta sawirka sawirka kaameeraha shirkadda wax soo saarka.
Sion Eilam, VP-ga iibka ee gobolka, EMEA, LiveU ayaa yidhi, “Isticmaalka LiveU wuxuu ku sii socdaa heer aad u xiiso badan dhammaan suuqyada isboortiga, ma ahan oo keliya waxyaabaha aasaaska u ah iyo ballaarinta quudinta, laakiin sidoo kale DR. Hadda waxaan bilaabeynaa inaan aragno adeegyo sidan oo kale ah halkaasoo tikniyoolajiyadeena u ogolaaneyso shirkadaha wax soo saarka inay si sax ah u xakameeyaan oo ay ula socdaan waxa ay tooganayaan iyagoo abuuraya xarun wax soo saar leh tikniyoolajiyadeena. Tani waxay siineysaa agaasimayaasha iyo kuwa iskudaya aragtida aragtida helitaanka sawirada tayada sare leh ee ay ugu baahan yihiin qiime aad u jaban.
ku xiran yahay cellular lagala kulmo gacanta HEVC isovideo, viarte, HDR, dhimista buuqa, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC, 2015, hoos bitrate, immersive, UHD / 4K / HD, H264 / H265, Warsaw wax soo saar gallery SoftAtHome, MStar, CES2017 Spears & Fiilooyinka cayaaraha	2019-11-07
Previous: Associate Production
Next: Injineer Software Android ah, Injineer Mobilo & Dhismo Injineer (REF15268Q) - Visa Digital Developmenter Platform (VDDP)